Banky any Lesotho momba ny fizahantany aorian'i Chine mamela ny trosa
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Banky any Lesotho momba ny fizahantany aorian'i Chine mamela ny trosa
Septambra 20, 2018
Ao Lesotho, ny fizahantany dia hita fa mety hitarika ny toekarem-pirenena mitolona.
Nanjary laharam-pahamehana io ary fotoana iray manokana taorian'ny fanapahan-kevitry ny governemanta sinoa hanafoana ny trosan'ny Fanjakana tsy manaja ny fananganana ny tranobe parlemanta sy ny 'Manthabiseng National Convention Center.
Ny governemanta sinoa koa dia nandray andraikitra hanome fanomezana ara-bola an'i Lesotho sy fanomezana vary miampy fanampiana ara-tsakafo hafa
Lesotho, fanjakana avo sy avo tsy voahodidin'i Afrika atsimo, dia ampitampitan'ny tambajotra renirano sy tandavan-tendrombohitra, ao anatin'izany ny tampon'ny Thabana Ntlenyana 3,482m. Eo amin'ny lembalemban'i Thaba Bosiu, akaikin'ny renivohitr'i Lesotho, Maseru, no misy korontam-bato nanomboka tamin'ny fitondran'ny Mpanjaka Moshoeshoe I tamin'ny taonjato faha-19.
Noho ny hatsaran-tarehy voajanahary miavaka amin'ny tendrombohitra mikitoantoana sy avo, Lesotho dia tokony hampiasa ny fahafaha-misarika olona tonga marobe amin'ireo mpizahatany hanatsara ny asa ara-toekarena.
Rethabile Stephen Morake, mpandraharaha mpizahatany izay mitantana an'i Leseli Tours, dia nilaza fa matory amin'ny fidiram-bolan'ny fizahan-tany i Basotho satria mbola hanaiky izany amin'ny lafiny samihafa izy ireo.
Ireto misy teny nalahatra nomena ny gazety Lesotho nandritra ny tafatafa.
"Matetika aseho ho firenena mahantra isika kanefa ny tena marina dia firenena sambatra sy manankarena isika raha ny fahitana ny fahaizan'ny fizahan-tany tsy voatanisa," hoy Andriamatoa Morake.
“Mila tsapantsika fotsiny hoe aiza ny herin'ny toekarentsika amin'ny maha firenena antsika sy hitrandrahana azy. Mino aho fa matory amin'ny harena tsy ampoizina isika. ”
Nilaza Andriamatoa Morake fa ny hatsaran'ny tarehy voajanahary sy ny lova ara-kolontsaina manankarena eto amin'ny firenena dia isan'ny antony manintona ny mpizahatany.
“Ohatra, ny haavontsika ambony dia iray amin'ireo karatra fisarihana lehibe indrindra. Isika ihany no firenena eto amin'izao tontolo izao mipetraka amin'ny ambonin'ny 1000 metatra ambonin'ny haabon'ny ranomasina ary mametraka antsika amin'ny toerana avo manohitra ny sisa amin'izao tontolo izao. Tena firenena voatahy tokoa isika. ”
Nilaza Andriamatoa Morake fa hahatsapa ny fahafaha-manao feno izay ananan'io sehatra io, ny sehatra hafa rehetra amin'ny toekarena dia tokony harahina handray anjara amin'ny fizahan-tany.
"Tokony hampahatsiahy antsika ny mpikambana rehetra ao amin'ny fiarahamonina, anisan'izany ireo mpanao politika, mba hahafahan'izy ireo manampy amin'ny famolavolana politika hampiroborobo ny fizahantany."
Nilaza ihany koa izy fa eo akaikin'i Afrika Atsimo, izay nahomby tamin'ny fivarotana ny fizahan-tany, Lesotho dia afaka manararaotra ireo mpizahatany voatendry ho any Afrika Atsimo hitsidika an'i Lesotho koa mandritra ny fijanonany any amin'ny firenena mifanila aminy.
“Diniho ny tanànan'i Clarence any Afrika atsimo, izay saika tsy misy toerana fizahan-tany nefa dia toerana ipetrahana fizahan-tany satria manana toeram-ponenana ho an'ireo mpizahatany mitsidika an'i Lesotho.
“Noho izany, manana toe-javatra iray ianao izay ahatongavan'ireo mpizahatany any Lesotho mandritra ny andro fa miverena matory any Clarence izay toerana andaniany ny ankamaroan'ny volany fa tsy eto izay misy ireo manintona.
“Tena mino aho fa ny fizahantany dia manana potika mety hitarika ny toekarem-pirenentsika kokoa noho ny sehatry ny fitrandrahana. Izay no inoako indrindra amin'ny fizahan-tany.
"Voafetra ny loharanon-karena voajanahary misy antsika ary hisy fotoana hahalany azy ireo, raha ny fizahan-tany kosa dia tsy misy fotoana iray hamaranana ny fampiakarana ny fizahan-tany ataontsika", hoy izy.
Ho an'ny anjarany, 'Marethabile Sekhiba izay mitantana ny Scenery Guesthouse any Maseru, dia nilaza fa ambany ny salan'isa momba ny fizahan-tany satria tsy dia mino an'ireo mpilalao ao amin'ity sehatra ity ny faritra samihafa ao amin'ny fiarahamonina.
“Raha ataontsika laharam-pahamehana ny fizahan-tany araka ny tokony ho izy dia tsy vitan'ny hoe hampitombo ny sehatra io fa hisy fiantraikany amin'ny sehatra hafa amin'ny toekarena hanatsara.
“Manomboka ao an-trano ny fiantrana, koa ndao isika hankafy ny hatsarana voajanahary omen'ity firenena ity.
"Mila mifampitantana isika amin'ny fanohanana an'ity sehatra ity izay mino aho fa manana ny lakilen'ny fanamby ara-tsosialy sy ara-toekarena ankehitriny," hoy i Ms Sekhiba.
Ny Sun RV Resorts dia mampitombo ny hakanton'ny Myrtle Beach RV traikefa miaraka amin'ny Resort Upscale vaovao
Jery ​​iray fotsiny dia handeha ianao amin'ny terminal biometrika amerikana voalohany